Ho tonga tsy ho ela…: manomana seho goavana eto an-tanindrazana i Lalatiana | NewsMada
Ho tonga tsy ho ela…: manomana seho goavana eto an-tanindrazana i Lalatiana
“Rahoviana ihany?”. Voavaly amin’izay ny fanontanian’ireo mpankafy. Ho avy i Lalatiana, ary hifamotoana amin’ireo naniry izany. Haverina eny amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena ny seho, ho famaliana ny fangatahan’ny rehetra.
“Hozaraiko aminao ireo tahiriko tsara indrindra…” Fampanantenana nomen’i Lalatiana ireo mpankafy azy, tao amin’ny pejy “Facebook” io. Mahakasika indrindra ilay fotoan-dehibe, hiverenany hiaka-tsehatra irery, etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina io, ny alahady 8 oktobra ho avy izao, manomboka amin’ny 3 ora tolakandro tsy diso.
Seho goavana satria aman-taony no efa niandrasana izany. Ho an’ireo nahatsiaro mantsy, tamin’ny taona 2012, izany hoe 5 taona lasa izay ny fiarahana farany tao amin’ity lapa ity. Tsy famerenana fotsiny ilay seho tamin’izany, fa fitondrana zava-baovao ho an’ny mpankafy, nandritra izay fotoana maro tsy nihaonana izay ihany koa izy ity.
Mivelatra amin’ireo tanora
Efa niatrika ny famerenana, nandritra ny andro vitsivitsy izay, ireo mpitendry hanaraka an’i Lalatiana amin’ity indray mitoraka ity. Tsikaritra fa niantso ireo tanora manan-talenta eo amin’ny zavamaneno ity mpanakanto ity, hiaraka aminy. Nitombo isa ihany koa izany, mba hahafeno ny fampisehoana. Tazana ao anatin’ny ekipa, ohatra, ireo mpiangaly ny zavamaneno tsofina toa an-dry Anjaniony, Andriniony, Andry Mika. Eo koa ry Solofo Bota sy Njaka eo amin’ny vata maroafitsoka, Nini eo amin’ny amponga maroanaka, Henintsoa eo amin’ny gitara beso, ny Anaa Quator eo ami’ny feo lafika ary ireo mpitendry zavamaneno misy tadiny. Ho avy hiaraka amin’i Lalatiana i Rija Randrianavonisoa, mpitendry gitara mpanaraka azy any ivelany any. Maromaro rahateo ny ketrika niarahan’izy ireo, ka fotoana hanomezana fofompofony amin’izany io seho io. Santioany amin’izany ireo hira tranainy teto afovoan-tany, naverin’izy mianadahy.
Na izany aza, tsy hadinoana hatrany ireo hira nanamarika vanim-potoana, nankafizan’ny maro an’i Lalatiana. Misy amin’ireny no voarakitra ao anatin’ny rakikira “Ianao no namako” sy “i-Malala”, ankoatra ireo hiran’i Albert Rajaofara, rain’i Lalatiana, izay hanomanany rakikira manokana ihany koa.
Mitady kalitao hatrany
Anisan’ny seho nahafantaran’ny maro ny mi’Ritsoka Production ilay tao amin’ny lapan’ny Fanantanjahantena ny taona 2012. Nanamarika rahateo ny fiverenan’i Lalatiana an-tanindrazana iny, ka nezahina araka izay tratra ny nampiavaka azy. Nampanantena sahady kosa ny tompon’andraikitra ao amin’ity trano mpamokatra ity fa tsy ho latsa-danja amin’izany, ary vao mainka aza miezaka mitady ny kalitao tsaratsara kokoa ny amin’ity, mba hampiakarana hatrany ny lentan’ny fampisehoana eto Madagasikara.
Vantany vao tonga amin’io herinandro mitsidika io dia hiatrika ny famerenana miaraka amin’ireo ekipa rehetra i Lalatiana sy i Rija Randrianavonisoa. Efa mandroso kosa ny fikarakarana rehetra raha ny vaovao nampitain’ny tompon’andraikitra. Fantatra fa hivoaka anio avokoa ny tapakila rehetra ho an’ity seho handrasan’ny maro ity.